Tojo faharesena saingy tsy hatao mahakivy fa hakana lesona hanatsarana ny ho avy. Nialoha ny lalao dia nahazo sitraka ara-bola avy amin’ireo filoha teo aloha miisa telo izy ireo. Anisan’ny olana ho azy ireo hatramin’izay ny ara-bola, saingy mba efa mivaha izany io amin’ny ankapobeny, kanefa tsy nanakana azy ireo tsy ho resy izany. Dia andeha ary hatodika kely any amin’ny fifidianana izay resa-bola izay e ! Ekena fa mety misy kandida tena manatosaka vola be, mahavita mividy vato na mamilivily ny safidim-bahoaka aza, saingy tsy rehefa manao izany dia handresy e ! Manomboka tonga saina sy mailo ny Malagasy izay hararaotina amin’ny tsy fananany, ka tadiavina hovidiana toy ny entam-barotra ny safidiny. Fanesoana ny tsy fananany izany, ary tsy ampahafirin’ny harem-pirenena naondran’ny olom-bitsy ny vola zaraina ka raisiny. Efa manomboka mahay mihaino ny feon’ny fieritreretany ny olona, ka tsy ho jamban’ny fampanofinofisana azy kanefa efa hita ny nafitsoky ny mpanao izany e ! Olona efa fantany ve fa hampitombo ny ambaindain’ny harena norobaina teto no mbola haveriny eo ? Ireny efa niaraha-naheno ireny ny laza ratsy sy fangoronan-karena tamin’ny fomba maloto, tsy teto ihany fa hatrany ampita any ny akony. Re izao fa dia toa misy fampiantsoana ireo matretrea roalahy indray, hono ataon’ny fitsarana any andafy any amin’ny faramparan’ity volana ity noho ny harena azo tamin’ny fomba tsy mazava, ka dia ho hita eo ny tohiny. Ka tsy mazava ve izany fa izay no nivoizana sy saika hanao amboletra amin’ilay hoe fihodinana voalohany dia vita amin’izay mba mahazo fahefana sy voaaro mandritra ny dimy taona aloha ? Efa manomboka tonga saina ny vahoaka fa tsy hanaiky hobadoina lava ary tsy maintsy mijinja izay nafafiny ny tsirairay e !